Dibad baxyo rabshada wata oo looga soo horjeedo dil booliiska Mareykanka nin madow ah u geesteen ayaa ka socda magaalada Atlanta ee dalka Mareykanka, xili wali dadka Mareykanka ka careesan yihiin dilkii loo geestay George Floyd.
Askari katirsan booliiska magaalada Atlanta ayaa toogasho ku dilay Rayshard Brooks oo 27 jir ahaa, waxaana ninkan oo madow ah xiliga la dilayay uu dhax hurday gaarigiisa oo horyaalay goob maqaayad ah.
Taliyaha booliiska magaalada Atlanta Erika Shield’s , ayaa si deg deg ah isku casishay kadib dilka booliiska u geesteen nin shacab ahaa, waxaa sidoo kale baaritaan lagu bilaabay askariga dilka geestay.
Dad ka careesan dilkan ayaana banaan baxyo waa weyn oo rabshada wata ka dhigay magaalada Atlanta, dadka banaan baxa dhigayay ayaa xiray wadooyin waa weyn waxa ay sidoo kale gubeen maqaayada horteeda dilku ka dhacay.
Dilkan mar kale ka careesiiyay shacabka Mareykanka gaar ahaan kuwa Madowga ah ayaa imaanaya xili maalmo kahor la aasay George Floyd oo dilkiisa uu gil gilay Mareykanka, waxaana mar kale laga cabsi qabaa in rabshadaha Mareykanka ka socda sii xoogeestaan.
Previous Madaxweyne Geelle oo war rasmi ah kasoo saaray kulanka Farmaajo iyo Muuse Biixi
Next Akhriso: Seddexda Weji Ee Wadaxaajoodka Soomaaliya iyo Somaliland